क्विन - मित्रताको कथा - भियतनाम अध्ययनको पवित्र भूमि
ल्यान बाच ले थाई 1
जब ग्रीष्म comesतुमा चामल छालहरू आउँदैछ, कानहरू जुन झन झन बढी सुनौलो हुन्छ, र जब सूर्य घामको तापले भारी फल्ने फलफूलका रूखहरूमा फल फलाउँदछ, तपाईं अक्सर थोरैको दुखद मोनोसाइलेबिक ट्विटर सुन्नुहुन्छ। चरा: «Quoc! Quoc!»। यो चराको कल हो Do-Quyen कि उहाँ संग सदाको लागि उनको दु: ख र उहाँ हराएको प्रिय मित्र को लागी सबै ठाउँमा खोज्छ। यदि तपाईं मित्रताको यो कथा सुन्न चाहनुहुन्छ भने, यो निम्नानुसार चल्दछ:
एक पटकको कुरा हो, त्यहाँ दुई साथीहरू थिए जसले एक अर्कालाई यति माया गर्थे कि उनीहरू दाजुभाइ नै थिए2.
एक दिन, उनीहरूमध्ये एक जनाले विवाह गरे र उसको साथीलाई उसको घरमा नयाँ घरमा बस्न आग्रह गरे, किनकि ऊ पछिबाट अलग हुन चाहँदैन। तर उनको दुलही यो मन पराएन, र उनी पाहुनालाई उनको घरमा स्वागत छैन भनेर देखाउन सबै गरे। सुरुमा उनले सल्लाह दिन शुरू गरिन कि साथीले आफ्नी स्वास्नी राख्नु पर्छ र अर्को घर बनाउनु पर्छ, किनभने उनले तर्क गरे, «यो केवल राम्रो थियो कि एक बच्चा जन्मनु पर्छ र परिवारको सदाको लागि र आफ्नो पुर्खाहरुको आफ्नो दायित्व पूरा गर्न»। तर जब उनीले थाहा पाए कि त्यस साथीको कुनै “बिहे गर्ने मनसाय” थिएन, उनले आफ्नो कार्यनीति परिवर्तन गरिन्। उसले आफ्नो लोग्ने अनि साथीलाई विश्राम दिएकी थिई, किनभने उसले दिनभर नोकरहरूलाई कुटपिट र पिटिरहन्छे। उनीहरू भन्छन कि तिनीहरू कुनै प्रकारको चीजका निम्ति राम्रो छैनन्।युवा र स्वस्थ व्यक्तिहरू परजीवीहरू जस्तै अरूमा बस्नुपर्दछ»। अक्सर, उनी सानो भित्ताका लागि दृश्य बनाउँछिन् र घोषणा गर्छिन् कि उनी संसारको सबैभन्दा दयनीय प्राणी हो, यति धेरैलाई खुवाउनको निम्ति नोकरको रूपमा काम गर्नुपर्दछ «निष्क्रिय मुख»। यो स्पष्ट थियो कि पाहुना मध्ये एक थियो «निष्क्रिय मुख»। सुरुमा, पछि शान्त रह्यो र आफ्नो प्रिय साथीलाई उसले संसारमा कसैलाई भन्दा बढी माया गर्थ्यो। तर अन्त्यमा, चीजहरू खराब हुँदै गए, र घरमा जीवन असहनीय थियो।
उसले भाग्नु पर्ने निर्णय गरे। तर यो कुरा थाहा पाएर कि विवाहित व्यक्तिले जताततै हेरिरहेको हुन्छ, उनले आफ्नो कोटलाई ज in्गलको एउटा हाँगामा झुण्ड्याए कि उनी अन्ततः अन्त्यमा अन्त्य हुन खोजेका थिए।
उनलाई थाहा पाए कि प्रिय पाहुना गएको थियो, विवाहित मानिस उनको खोजीमा हतारिए। ऊ दौडियो अनि दगुर्दै दगुर्दै गयो र ज the्गलसम्म आइपुग्यो र कोटलाई रूखमा झुण्डिएको देखे। उनी धेरै रोए र रोए र सबैलाई सोध्यो जहाँ उनको साथीलाई भेट्न सकिन्छ। कसैलाई थाहा थिएन। दाउरा काट्नेहरूले भने कि उनी ज a्गलको गहिरो गुफामा बस्ने डरलाग्दो बाघले लगेको हुनुपर्छ। त्यहाँबाट गइरहेकी एउटी वृद्ध महिलाले भनिन् कि उनी बेसी नदीमा डुबेको हुनुपर्छ। अरु धेरै आँसु बगाए।
«हाय! मेरो प्यारो साथी मरिसकेको छ र गयो», विवाहित व्यक्तिले भने।
«हामी यसलाई विश्वास गर्दैनौं», गनगन गर्ने बाँस रूखहरू भने।
«ऊ मरिसक्यो र गयो», उनले चराहरूलाई भने।
«हामी त्यस्तो सोच्दैनौं।, तिनीहरूले टकराए।
र अन्तमा, उनको मनबाट नयाँ आशा उत्पन्न भयो।
उसले फेरि पर्वतारोहण गर्यो र पहाडहरू र उपत्यकाहरू पार गर्यो जब सम्म उसको खुट्टाहरूमा चोट लाग्दैन र रक्तपात हुन्छ, तर ऊ हिंड्न बन्द गरेन। र उनी सँधै कल गरिरहन्छन्: «Quoc! Quoc! तिमी कंहा छौ? तिमी कंहा छौ?»- Quoc उनको साथीको नाम थियो।
अन्तमा, थकानको सामना गरी ऊ चट्टानतिर टाउको झुकायो र निदायो। उसले आफ्नो साथीको सपना देख्यो र उसले सपना देखिरहेको बेला उसको जिन्दगी चुपचाप छोडियो। र उसको आत्मा, अझै चंचल, चरामा परिवर्तन भयो जसले कललाई दोहोर्यायो «Quoc! Quoc!" दिन र रात।
घरमा, उनकी दुलही रुँदै र उनको अनुपस्थितिको बारेमा चिन्तित। केही दिन पछि, ऊ आफू फर्केर नआएको देख्यो, उनी अझै पर्खिन सक्छिन्, चोर्छिन् र लामो समयसम्म घुम्छिन् जबसम्म उनी एउटा ठूलो ज to्गलमा आइपुगिनन्। उनी कहाँ जाने थाहा थिएन, धेरै दु: खी र डराइन्। अचानक उनले आफ्नो लोग्नेको आवाज सुने: «Quoc! Quoc!»। उनको मुटु छिया छिन, र उनी उसलाई खोज्न दौडिन, तर केवल पखेटाको खनजरेको आवाज सुने र चरा यसको उजाड मोनोसाइलेबिक ट्विटरको साथ उडिरहेको देखे: «Quoc! Quoc!"।
उनले खोज र व्यर्थमा खोजी गरी, र अन्तमा, शारीरिक र नैतिक थकित थियो। उनको मुटु यति उदासी र पूर्ण रूपले भरिएको थियो कि यो भाँचियो, जबकि चरा Do-Quyen अझै जताततै उडान, उहाँलाई आफ्नो अनन्त दुःख संग।
◊ भियतनामी संस्करण (Vi-VersiGoo): क्विन गर्नुहोस् - Cau chuyen ve tinh प्रतिबंध.
◊ BICH-CAU पूर्वनिर्धारित बैठक - सेक्सन १.
1 : आरडब्ल्यू पार्क्सको अग्रलेखले ले थाई बाच ल्यान र उनको छोटो कथा पुस्तकहरू प्रस्तुत गर्दछ: "श्रीमती। बाख ल्यानको एक रोचक चयन भेला गरिएको छ भियतनामी किंवदन्ती जसको लागि म संक्षिप्त शब्द लेख्न खुसी छु। यी कथाहरू राम्ररी र लेखकले सरल रूपमा अनुवाद गरेका छन्, यि आकर्षणको आकर्षण छ, जुन उनीहरूले विदेशी लुगा लगाएको परिचित मानवीय परिस्थितिलाई व्यक्त गर्ने भावनाबाट कुनै सानो अंशमा व्युत्पन्न भएका छन्। यहाँ, उष्णकटिबंधीय सेटिंग्समा, हामीसँग वफादार प्रेमीहरू, ईर्ष्यालु पत्नीहरू, निर्दयी सौतेनी आमाहरू, जुन यति धेरै पश्चिमी लोक कथाहरू बनेका छन्। एउटा कथा वास्तवमै छ सिन्ड्रेला फेरी मलाई विश्वास छ कि यो सानो पुस्तकले धेरै पाठकहरू भेट्टाउनेछ र त्यस्तो देशमा मैत्री चासो जगाउनेछ जुन वर्तमान समयका समस्याहरू उनको विगतको संस्कृति भन्दा अफसोसको रूपमा राम्ररी परिचित छन्। साइगन, २th फेब्रुअरी १ ​​26 1958। "
2 : एक भनिन्छ अमान र अर्को हो Quoc.
◊ सामग्री र छविहरू - स्रोत: भियतनामी महापुरूष - श्रीमती LT Bach ल्यान। किम लाइ एक क्वान प्रकाशकहरू, सैगोन १ 1958 .XNUMX।
◊ फिचर गरिएको सेपियाइज छविहरू बान तु थो द्वारा सेट गरिएको छ - Thanhdiavietnamhoc.com.
पोस्ट दृश्यहरू: 119
← बच्चाको VIETNAM का खेलहरू - फेब्रुअरी, २२, १ 22 1943 मा मिनेटको मिनेटहरू
गुज-डाउन कोट - अलौकिक क्रस-बोको लिजेन्ड →
आजको भ्रमण: 156
अन्तिम7दिन भ्रमणहरू: 7,226
कुल भ्रमण: 81,758